Iindaba -Lwazi olusisiseko lokuBala
Ngaba uyazi ukuba zithini iindawo iibheringi ngoomatshini? Zibizwa ngokuba “kukutya kwemizi-mveliso” kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo oomatshini abalulekileyo. Kuba ezi zinto zibalulekileyo zisebenza kwindawo engabonakaliyo, zihlala zingaqondwa ngabantu abangafundanga. Uninzi lweengcali ezingezizo ezomatshini abazi ukuba zithini iibheringi.
Ukuqhelaniswa nelungu yinxalenye enceda into ijikeleze, eyaziwa ngesiJapani njengejikuke.Nanjengoko igama lisitsho, ukuthwala yinxalenye exhasa "ishafti" ejikelezayo kumatshini.
Oomatshini abasebenzisa iibheringi baquka iimoto, iinqwelomoya, oomatshini bokwenza umbane, njalo njalo.
Kula matshini, iibheringi zixhasa “ishafti” enamavili akhweleyo, iigiya, iiturbines, iirotor kunye nezinye iindawo zokuyinceda ijikeleze kakuhle.
Njengomphumo woomatshini abohlukeneyo ukuba basebenzise "ishafti" ejikelezayo, ngenxa yoko ukubamba kuye kwaba ngamacandelo abalulekileyo, aziwa ngokuba "kukutya kwemizi-mveliso yoomatshini." Eli candelo linokubonakala lingabalulekanga, kodwa libalulekile. Ndihlala ubomi obuqhelekileyo.
Ukunciphisa ukungqubana kunye nokwenza ujikelezo luzinze
Kufuneka kubekho ukungqubana phakathi kwe "shaft" ejikelezayo kunye nelungu lenkxaso elijikelezayo. Iibheringi zisetyenziswa phakathi kwe "shaft" ejikelezayo kunye nenxalenye yenkxaso ejikelezayo.
Iibheringi kunokunciphisa ukukhuhlana, wenze ujikelezo uzinze ngakumbi kwaye kunciphise ukusetyenziswa kwamandla. Lo ngowona msebenzi mkhulu wokuthwala.
Khusela iindawo zenkxaso ezijikelezayo kwaye ugcine "i-axis" ejikelezayo kwindawo efanelekileyo
Kukho amandla amakhulu phakathi kwe "shaft" ejikelezayo kunye nenxalenye yenkxaso ejikelezayo. Ukuthintela kuthintela ilungu lenkxaso elijikelezayo ekubeni lonakaliswe ngulo mkhosi kwaye ligcina "ishafti" ejikelezayo ikwindawo efanelekileyo.
Ngokuchanekileyo kungenxa yale misebenzi yokuthwala esinokuthi siphinde sisebenzise lo matshini ixesha elide.
Ixesha lokuposa: Aug-22-2020